Keenista Codad Fudud oo Lahaa Miiska: Hal Sheeko Woman
The Association Lyndale Neighbourhood Association waa baabuur loogu talagalay xubnaha bulshada si ay u dhistaan xaafadooda. Aragtooda waxay tahay in ay la xiriirto bulshada kala duwan ee Lyndale si loo dhiso xaafad nabadgelyo, firfircoon, iyo deganaansho waara.
Adriana Lara iyo xubnaheeda qooyska ee Lyndale xubin ka ah xerada Lyndale Campers 'ee sanadihii ugu danbeeyay. Isagoo ka qaybgalay tiro ka mid ah xafladaha jaaliyada ee xaafadda, Adriana ayaa ugu danbeyn ku biiray kooxda Latina ee Barnaamijka Hoggaanka Dumarka (Women Leadership Program) waxaana kaqeybqaaday doorashadii xaafadda Lyndale Neighborhood Association ee sanadka 2013.
Adriana wax ku biirinteeda iyo ka qaybqaadashadu waxay ahayd mid muhiim u ah dadka degan Lyndale ee saameynta ay ku yeesheen mushaar kordhinta bulshada.
Waxay ku qancisay in ka badan mid kale oo mutadawiciin ah sanadkaas oo wuxuu ka mid ahaa koox isboorti ah oo isku duba riday ka dib doorashadii si looga hadlo waxa ay ka maqleen xaafadda. Adriana waxay soo saartay shuruudaha iyo walwalka ee Lyndale ijaartayaasha, keenaya aragti qiimo leh oo ku saabsan wadahadalka ku saabsan dadka degaanka ah in kuwa kale ee aan wax maqlin aysan maqlin. Fikraddeeda ayaa kooxdu iyo xaafadduba u soocday si ay u tixgeliyaan sharciyada taageerada si loo kordhiyo mushaarka ugu yar ee gobolka iyo in ay ka caawiyaan in Lyndale uu sii noolaado.
Adriana waxay sii waday in ay la kulanto qayb ka mid ah mushaharka hooseeya ee mushaharka oo ay gacan ka geysatay qorshayaasha lagu dhiirrigelinayo xaafadda si ay u qaataan barnaamijka. Waxa ay qabatay xaflad ka dhacday xaflada La Posada ee xaafada, waxaana lagu ballansanaa in ay kor u qaaddo kulamada shir weyn oo bulshada ah, waxayna gacan ka geysatey sidii loo abaabul lahaa barnaamijka kulankaas. Adriana wax ku biirinteeda iyo ka qaybqaadashadu waxay ahayd mid muhiim u ah dadka degan Lyndale ee saameynta ay ku yeesheen mushaar kordhinta bulshada.
Adriana ayaa sidoo kale ka qaybgashay Shirkii Nabadda ee Haweenka ee Bishii Jannaayo. Shirku waxaa martigeliyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Isbahaysiga Dumarka ee Nabadgalyada Dhaqaalaha, waxayna ku salaysan tahay biilasha biilasha loogu talagalay taageeridda doorka haweenka ee dhaqaalaha. Adriana waxay sheeko ku saabsaneyd dhibaatooyinka dhaqaale ee ay kala kulmeen waxayna waydiiyeen guddiga sida ay u taageeri lahaayeen. Soo bandhiga codkiisu wuxuu kor u qaaday codka Adriana wuxuuna beddelay wadahadalka. Intii lagu jiray shirkii sanadlaha ee bishii Juun ee sannadkii la soo dhaafay, Adriana waxaa loo doortay xubin guddi oo ka tirsan Ururka Lyndale Neighborhood Association. Waxay tahay qofka ugu horreeya ee ku hadla afka Isbaanishka si uu ugu adeego guddiga xasuusta dhawaanta la soo dhaafay waxana uu sii waday inuu ka qaybqaato sidii uu uga caawin lahaa in Lyndale ay noqoto bulsho nabdoon, firfircoon, iyo waara.